Bingo | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » Bingo
Posted by ဆူး on Sep 21, 2011 in Think Tank | 13 comments
Bingo ဆူး စိတ်ကူး
တနေ့က အသိတယောက် ဧရာဝတီတိုင်းဘက်က မိတ်ဆွေတယောက်ဆီက ကြားတဲ့ သတင်းကတော့ ၂လုံး ၃လုံး အသေအကြေ လိုက်ဖမ်းတော့ ဘင်ဂို ခေတ်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။
ညည ကစားရုံမှာ မအိပ်တန်းကို ကစားကြတာ တပွဲကို ၁၀၀၀ နဲ့.. တညလုံး တချို့ဆို ၂သောင်း ၃သောင်း တညတည်းပြုတ်သွားကြတာပါပဲ။ ညည ကစားရုံတွေမှာ လူ ၅၀လောက် ဆိုရင် တယောက် ၁၀၀၀ နှုန်းနဲ့ ဆိုတော့ ၅သောင်း ကို နိုင်တဲ့ လူက ၄သောင်း၉ထောင် နဲ့ နံပါတ်ခေါ်တဲ့လူက ၁၀၀၀ ယူပါတယ်။ တညလုံး အိပ်ရေးပျက်ခံ ကစားပြီး တပွဲမှ မနိုင်ရင်တော့ မရှိတဲ့ အထဲက မွဲနေကြအုန်းမှာပါပဲ။
လူတွေလည်း တမျိုးမဟုတ်တမျိုး ရှာကြံစွဲလန်းနေကြတာပဲ။
လူထု ဦးလှ ရဲ့ 
“ ကျောင်းကန် အနီးမှ မြန်မာ့ ပုံပြင်များ ” ထဲ က လို ဆိုရရင်
“ နောက်ဘုန်းကြီး ၂ချက်ခေါက် ” တဲ့…ဆိုသလို
လောင်းကစားက အစမလုပ်တာကောင်းပါတယ်လို့ 
ပေါက်ဖော်ကတော့ လောင်းကစား မလုပ်ဘူး တနေ့ တနေ့ ရွာထဲမှာ ပုလင်းလေး တကိုင်ကိုင်နဲ့ ခါးမနိုင်ဘူးဖြစ်နေရှာတာ.. ဟိဟိ..
ကြံကြံ ဖန်ဖန် ဘယ်လို ကစားတာလဲတောင်မသိဘူး….:(
– စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် ဖွင့်ရင်ဖွင့်…။
– ပြည်နယ်တခုကို.. သီးသန့်လောင်းကစားခွင့်လိုင်စင် ပေးပြီး.. မြို့သစ်တည်ရင်တည်..။
– ၆ပါးသီလဆိုပြီး.. လူတွေစောင့်ရမဲ့သီလတခုထပ်တိုး.ပြီး.. မိုဒယ်အောက်နေတဲ့..ငါးပါးသီလကို ..New Version လုပ်ချင်လုပ်..
ုငါးပါး သီလတောင် မမြဲနိုင်တာ ခြောက်ပါးဆို ယင်တော့ မထူးပါဘူး ချွတ် ချလိုက်တော့မယ်.
လောင်းကစား ကို စွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်တဲ့သူ လောင်းကစားကြောင့် ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ဘူးပါတယ်
လောင်းကစားလုပ်နေတဲ့ အချိန် သူတို့ကို ဘာပြောပြော နားမ၀င်တော့ဘူး
ဆေးလိပ်က လူကို ဒုက္ခပေးတယ် ဆိုတာ မှန်တယ် ဒါပေမဲ့ အချိန်တော့ နဲနဲယူသေးတယ်
လောင်းကစားကတော့ အချိန်ပိုင်းလေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုတွေပါ ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်
လောင်းကစားစွဲတာ အရက်စွဲတာထက်ဆိုးတယ် … ဘ၀ပျက်ကုန်တဲ့လူတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးတယ် … မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင်လောင်းကစားလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုများနေမယ်မသိဘူးနော် ….
ရွာထဲမှာလည်း ကျုပ်တို့ရထားတဲ့ပွိုင့်တွေနဲ့ လောင်းကစားတခုခု ဆော့လို့ရရင်ကောင်းမယ်။ သဂျီးက ဒိုင်လုပ်ပြီး အကောက်ယူပေါ့။ အရှုံးမရှိဘဲ ပေးထားတဲ့ပွိုင့်တွေ ပြန်ယူနိုင်မယ်။ ငွေသားအဖြစ် လဲခွင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံဂျားက မင်န်ဘာတွေကိုတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကစားဖို့ ပွိုင့်ဝယ်ခိုင်း။ သဂျီးရေ အားအားရှိ လွှတ်တော်ထဲဝင် အချောင်နှိုက်ဖို့ အကြံထုတ်မနေနဲ့၊ ကိုယ့်ရပ်ရွကြီးပွားကြောင်းလည်း စဉ်းစားပါအုံး..။
လူတွေများ ကိုယ့်အကျိုးစီပွားပျက်မှာကို သိသိကြီးနဲ့ကိုလုပ်နေတော့တာပဲ
ဒီလိုအလုပ်တွေကလဲ စွဲမိပြီဆို ဖြတ်ရခက်တာကိုး ………….
ကိုကြောင်ကြီး အကြံကို ထောက်ခံပြီး မဆူးရဲ့ online bingo လေးကို mandalaygazette မှာ ကစားလို့ ရရင် ကောင်းမှာပဲ … နော် သူကြီး
ဆူးလည်း ခရီးသွားတုန်းက ခရီးသွား အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး ခရီးသည်တွေ အချင်းချင်း ရင်းနှီးအောင်နဲ့ ကားစီးတဲ့ အချိန်မပျင်းရအောင် ဘင်ဂို ကစားခိုင်းတယ်။ ကစားနည်း မသိရင် သင်ပေးတယ်။ နိုင်တဲ့လူကို ခရီးသွား အဖွဲ့ကပဲ လက်ဆောင်တွေဘာတွေ ပေးတယ်။ ဆူး တောင် လက်ဆောင်တခု ရလာသေးတယ်။ တနေ့က ကြားမှ အဲဒီလိုမျိုး ပိုက်ဆံနဲ့ ဆော့လို့ ရမှန်း သိတော့တယ်။